Shirka looga hadlaayo Arrimaha Somalia oo gowr dhow ka furmaayo Magaalladda London – idalenews.com
Waxaa maanta la filaaya in Magaalada London ee Cariga Britain uu ka furmo Shirka looga hadlayo Arrimaha somalia oo ay marti galisay Dowladda Britain, iyadoona la filaayo in Shirkaasi ay ka qeybgalaan Dowladaha Saaxiibada la ah Somalia isla markaana daneeya Arrimaha Somalia.
Shirka ayaa ujeeddadiisa lagu sheegay in la mideeyo taageerada beesha caalamka ay siiso Soomaaliya iyo in dowladda laga caawiyo qorshayaasheeda siyaasadeed ee ku wajahan dib-u-dhisidda ciidamada qalabka sida, booliska, ilaalada xeebaha, nidaamyada caddaaladda, maareynta hantida dadweynaha iyo gacan ka geysashada abuurista degannaansho siyaasadeed.
Shirka London waxaa sidoo kale lagu soo hadal-qaadi doonaa howlgalka cusub ee Qaramada Midoobay UNSOM, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), arrimaha qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalalka deriska ah iyo doorka qurbajoogta ee dib-u-dhiska dalka.
Sidoo kale, waxaa London gaaray Madax ka kala socta Caalamka oo uu ugu horeeyay, Xoghayaha Guud ee Jaamacada Carabta Nabil Al-Carab iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay ka ambabaxay Magaalada Qaahira ee dalka Masar,iyaga oo ka qeybgalaya shirka arimaha Soomaaliya looga hadlayo.
Si kastaba ha ahaatee, Shirka ayaa waxa uu yahay mid bilowgiisa iyo dhamaadkiisaba rajo wanaagsan laga qabo, iyadoona la filaayo inuu furmo saacadaha soo socda.